एउटै फर्मका २३ हजार कुखुरा मरे- बर्डफ्लूको आशंका, लाइसेन्स पाउन २ वर्ष ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
एउटै फर्मका २३ हजार कुखुरा मरे- बर्डफ्लूको आशंका, लाइसेन्स पाउन २ वर्ष ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३५२ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा विभिन्न विषयमा विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
-हजारौं कुखुरा मर्दा पनि पशु सेवा विभागका कर्मचारी किन आउदैन्न ?
काठमाडौं । काठमाडौं तारकेश्वरका श्यामसुन्दर बस्नेतको सागर पोल्ट्रीफर्ममा २८ हजार लेयर प्रजातिका कुखुरा थिए । उनको फर्ममा १६ गतेदेखि भटाभट कुखुरा मर्न थाले । १०–२० वटा हुँदै दैनिक ५०–६० वटा कुखुरा मर्न थालेपछि बस्नेतले फागुन १९ गते त्रिपुरेश्वर स्थित केन्द्रीय पशु प्र्रयोगशालामा मरेका कुखुराको नमुना लगेर गए । परारम्भीक परीक्षणमा नै फ्ल्यु देखियो । तर कुन फ्ल्यु हो भन्ने एकिन गर्नका लागि पीसीआरमा पठायो । ७२ घण्टामा आउनु पर्ने रिपोर्ट ४ दिनसम्म पनि आएन । श्याम सुन्दर प्रयोगशाला दाइरहे । यता दैनिक हजारौंको संख्यामा कुखुरा मर्न थाले ।
-एउटा लाइसेन्स लिन कति समय कुर्ने ?
काठमाडौं । सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स वर्ष दिन बढी पर्खनु पर्ने बाध्यता छ । ट्रायल परीक्षाको लागि आवेदन दिदाँको दिनदेखि लाइसेन्स हात पार्दासम्म कसै कसैले त महिना हैन २ वर्षसम्म पर्खेका छन् । उपत्यकामा ट्रायल दिने धेरैको गुनासो आँफू पास भएपनि ट्रायल सेन्टरमा खटिएका कर्मचारी तथा ट्राफिक प्रहरीले फेल बनाइदिएको भन्ने आरोप हुन्छ । यही गुनासो व्यवस्थापनाको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सीसी क्यामेरा प्रयोग गरेको हुन्छ । तर बिडम्बना ट्रायल दिनेहरुले आफू पास फेल भएको सीसी क्यामेरामा हेरेर ढुक्क हुन भने पाउँदैनन् ।
-नक्कली सर्टिफिकेट बनाउने गिरोहको स्टिङ अपरेसन !
काठमाडौं । काठमाडौं स्वयम्भु स्थित प्राइभेट एसईई परीक्षामा सहभागी गराउने नाममा ठगी धन्दा हुने गरेको भेटिएको छ । हामीलाई प्राप्त सुचना फलो गर्दै जाँदा स्वयम्भु स्थित ओरल कम्प्युट एण्ड ल्याङग्वेज इन्स्टिच्युटले कक्षा आठको नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र बनाएर एसीईईमा सहभागी गराउने गरेको भेटिएको छ । हामीले यो इन्स्टिच्युटमा ग्राहक बनेर स्टीङ अपरेसन ग¥यौ । इन्स्टिच्युट सञ्चालक अम्बिका थापाले ४० हजार भए परीक्षा बोर्डमा रजिष्टर गरेर प्रवेश पत्र बनाउने, कक्षा आठको नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र दिलाउने बताउँछन् ।